Adeegyada Sharciga - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > Adeegyada Sharciga
Saxiix si aad u hesho cusbooneysiin muhiim ah oo ku saabsan arrintan.
Waxaan ubaahanahay mutadawiciin
Ma ku jirtaa hawsha DACA ama codsiyada jinsiyadda? Kooxdayada adeegyada sharciga ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan! Waxaan bixinnaa ilo, aqoon isweydaarsiyo, iyo ballamo gaar ah si looga caawiyo xubnaha bulshada inay maraan dhibaatooyinka ka jira helitaanka ama cusboonaysiinta sharciga.
Fadlan ogow: Shaqaalaheena adeegyada sharciga ma ahan sharci yaqaano sharciyeysan mana bixin karaan talo sharci oo gaar ah, laakiin waxaa loo heli karaa inay ku siiyaan hagitaan ku saabsan howlaha sida dalbashada iyo cusbooneysiinta DACA, ama dalbashada dhalashada.
Sanadka 2020 oo keliya, waxaan ka caawinnay xubnaha bulshada inay soo gudbiyaan
Codsiyada kaarka cagaaran
Booqo annaga Events Bogga si aad u aragto goorta aqoon isweydaarsiga soo socda uu noqon doono ama isdiiwaangelin doono si loo ogeysiiyo isla marka la qorsheeyo. Ama, booqo maktabaddeenna macluumaadka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan DACA, TPS, ama Jinsiyadda.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado wuxuu ku tiirsan yahay caawimaadda mutadawiciinta si ay u martigeliyaan aqoon isweydaarsiyada waddaniyaynta. Garyaqaanka, ardayda, iyo dhamaan mutadawiciinta waxay soo dhaweynayaan inay ka caawiyaan baaritaanka u qalmida, foomka buuxinta, saadka & wax badan. Tababar iyo qado ayaa la bixiyay. Fadlan isdiiwaangali si tabaruc ah halkan!
Habka Magangalyada Cusub ee Biden: Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Muhaajiriinta Colorado Waydiiiyaan Su'aalo garaacid Adag Senatarrada ku saabsan Jinsiyadda, Dib u dhis si ka wanaagsan, iyo korodhka miisaaniyada muranka dhaliyay
Denver, CO - Hogaamiyaasha iimaanka, u doodayaasha, iyo xubnaha bulshada soogalootiga ayaa ku biiray Senator Hickenlooper iyo Senator Bennet hoolka dadweynaha ee fiidnimadii Isniinta. In ka badan 200 oo qof oo ka yimid Montrose ilaa Fort Morgan, Pueblo ilaa Fort Collins ayaa ka soo qayb galay. Dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa muujiyay taageerada xirmada dib-u-heshiisiinta miisaaniyada ee dib-u-soo-saarka shabagyadeena badbaadada bulshada iyo aqoonsiga muhiimadda muhiimka ah […]
Sida Biden uu uga hadlayo dalka iyada oo uu jiro khilaaf sii kordhaya, cadaalada socdaalka ayaa aad uga muhimsan waligeed
In kasta oo Madaxweyne Biden uu soo bandhigay khilaafka ba'an ee ka jira Yurub, maamulkiisu wuxuu sii wadaa inuu masaafuriyo magangelyo-doonka Washington DC - Khudbadda madaxweyne Biden ee khudbadda midowga ee qaranka ayaa timid iyada oo ay jirto xiisaddii ugu weyneyd ee Yurub tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay geesinimada dadka reer Ukraine, waxaana uu daboolka ka qaaday xaalada adag ee […]
Denver CO- Noofambar 19, 2020 Golaha Wakiiladu wuxuu meel mariyey Xeerka Dib-u-soo-celinta Wanaagsanaan (BBB), oo hadda waxay ku xiran tahay Senate-ka inay ku dhaqmaan sharcigan. In kasta oo sharciga dib-u-heshiisiinta uu ka kooban yahay qodobo badan oo muhiim ah oo si xun loogu baahan yahay kuwaas oo caawin doona qoysas Maraykan ah oo aan tiro lahayn oo ay ku jiraan qoysaska soogalootiga ah, sharciga sharciga luuqadda hadda jira si wax looga qabto […]
Coloradans March si ay u dalbadaan Jinsiyadda Dadka oo dhan iyo Caddaaladda Muhaajiriinta iyo Qaxootiga
Socodka taariikhiga ah iyo isu -soo -baxa Denver wuxuu ugu baaqi doonaa Koongareeska inuu ugu dambeyn wax ka qabto socdaalka kadib tobanaan sano oo wax -qabad la'aan ah. Yaa: Xubnaha bulshada ee ka kala yimid gobolka oo dhan (Lamar, Grand Junction, Fort Morgan, Boulder, Aurora, Denver), Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado (CIRC), Guddiga Adeegga Asxaabta Mareykanka ee Colorado (AFSC), Ururka Xorriyadda Madaniga ah ee Colorado (ACLU) ), Colorado […]
60 Kheyraad loogu talagalay Taakuleynta Bulshooyinka Muhaajiriinta ah iyo Qaxootiga
Markaad lashaqeyneyso muhaajiriinta iyo jaaliyadaha qaxootiga, hubi ilahaan oo ay kujiraan xirmooyin qalab ah, bogag macluumaad iyo tilmaamo ku saabsan meelaha Waxbarshada, Shaqada, Caafimaadka, Guriyeynta iyo Dib udajinta, Sharciga, iyo Amniga.
Ku Noolaanshaha Limbo: Tilmaame Lagu Fahmayo Xuquuqdaada, Waxtarradaada, Iyo Waajibaadkaaga Markaad Haysatid Xaaladda Socdaal
Tilmaamaheena ugu dambeeyay, Ku Noolaanshaha Limbo, oo aan soo saarnay iyadoo lala kaashanayo Xarunta Kheyraadka Sharciga ee Muhaajiriinta, United We Dream, Soogalootiga Soo Kacaya (oo horay loo oran jiray E4FC), iyo UndocuMedia ayaa kaa caawin doona inaad fahanto xuquuqdaada, dheefahaaga, iyo waajibaadkaaga haddii aadan lahayn xaalad socdaal gudaha Mareykanka.
Iska jir Nootaayooyinka, Khiyaanooyinka, iyo Khiyaanooyinka | Cuidado con Notarios, Fraudes y Estafas
Ma qorsheyneysaa inaad caawimaad sharci ka raadsato kiiskaaga socdaalka? Waa muhiim inaad ka taxaddarto nooca caawimaad sharci ee aad hesho, xusuusnow, kaalmada sharci ee khaldan ayaa dhaawici karta! Hubso inaadan ku kadsoomin xanta, nootaayooyinka iyo khayaanada.